Fandotoana rano nandritra ny fitondrana vohoka
Mandritra ny fitondrana vohoka, dia miova tanteraka ny endriky ny vaginal. Mety hanelingelina ny reny hoavy izany. Ny vehivavy dia mitatitra be dia be amin'ny rano be mandritra ny fitondrana vohoka, matetika izany no mety ho fitsipika, fa mandrakariva. Noho izany dia ilaina ny miezaka hahafantatra ny vaovao momba ity olana ity mba hahafantarana ny toetoetran'ity tranga ity.
Ny antony mahatonga ny fitsaboana rano
Ao anatin'ny vatan'ny reny dia misy fiovana maro. Ny anjara asany manan-danja amin'io dia ny hormonal background. Avy aminy izy, amin'ny voalohany, miankina amin'ny tsimok'aretina.
Any am-piandohan'ny fiantrana, mitombo ny halavan'ny progesterone. Izany dia manome ny fepetra ilaina amin'ny fitazonana ny fiainan'ny foetus. Eo ambany fiantraikan'ny progesterone, ny fialan'ny tsimok'aretina dia miteraka tsy fitoviana. Lasa matevina sy mibontsina izy ireo. Noho izany, tsy dia fahita firy ny fitsaboana rano mandritra ny fitondrana vohoka.
Manodidina ny 12 herinandro, mitombo ny famokarana estrogen - ilaina ny miomana amin'ny fiterahana. Ankoatr'izay, ny hormone dia manampy amin'ny sehatr'asa maromaro ao amin'ny vatana. Amin'izao fotoana izao, dia mihena ny gliosida matanjaka. Amin'ny ankapobeny, amin'ny vehivavy bevohoka, ny vehivavy dia mijery ny fitsaboana rano amin'ny fahavaratra faharoa. Izany no fitsipika, mitranga any amin'ny renim-pianakaviana manan-danja indrindra, saingy miteraka olana maro izany. Tsy ilaina ny fitsaboana, na izany aza, zava-dehibe ny fanaraha-maso tsara ny fahadiovana.
Ireto ny soso-kevitra fototra tokony hotandremana:
Matetika matetika ny mandro;
Tsara ny mampiasa ireo fanasana isan'andro, fa tsy maintsy misafidy ireo izay tsy misy tsiro;
Tsy afaka mampiasa tampons ianao;
Ilaina ny manova ny lambam-bolo matetika;
Ny kiraro dia tokony hatao amin'ny landihazo.
Fa zava-dehibe ny hahatakatra fa ny tsiranoka dia tsy tokony hanana fofona, lokony, fahalotoan'ny ra. Raha toa ka mahatonga azy ireo hikasika, dia mendrika ny hitsidika dokotera.
Noho io antony io ihany, dia mety hipoitra ny rano mangatsiaka mandritra ny fitondrana vohoka amin'ny fahatelo fahatelo. Saingy amin'izao fotoana izao dia mety hampidi-doza ny fluid amniotiques, noho izany dia zava-dehibe ny manaisotra ity fandikan-dalàna ity. Ao anatina fialan-tsasatra dia misy fitsapana manokana izay hanampy amin'ny famaritana ny fivoahan'ny rano. Saingy tsara kokoa ny mandeha any amin'ny tovovavy iray mpitsabo aretin-tsaina raha te ho voan'ny diagnostika marina. Ny fluidin'ny amniotique mandritra ny fitondrana vohoka dia toy ny fitrohana rano mangatsiaka mandritra ny fitondrana vohoka miaraka amin'ny fofona mamy. Ny soritr'aretina toy izany dia tokony ho lasa famantarana ho an'ny fitsidihana maika ny dokotera.
Mampalahelo fa mety ho voan'ny aretina isan-karazany koa ny reny any aoriana. Ankoatra izany, mandritra ny vanim-potoana io, ny mikroflora ao amin'ny vagina dia mahatsapa amin'ny ankamaroan'ny mikraoba.
Ny herpesana ara-pananahana dia miseho amin'ny fisiahana amin'ny alikaola. Ny bakteria ihany koa dia miseho amin'ny bobly. Nipoaka izy ireo tatỳ aoriana. Azo atao ny fanaintainana amin'ny lamosina, ny kibo.
Ho an'ny vaginôsan'ny bakteria mandritra ny fitondrana vohoka, dia mitovitovy amin'ny toetr'andro ny fototeny fotsy. Taty aoriana dia lasa matevina izy ireo, matevina, manova ny lokony ho maitso. Miaraka amin'ny fanivanana izany. Ny vehivavy koa dia mitaraina noho ny fanaintainana rehefa raraka, tazo. Ireo aretina ireo dia mitaky fitsaboana eo ambany fanaraha-mason'ny manam-pahaizana manokana iray.
Tokony hohadinoin'ireo mama ny hoavy hoe inona no tokony hampandrenesina ny famantarana:
fanovana amin'ny tsy fitovizan-tsokosoko;
ny fery amin'ny génitaona;
fanovana ny loko sy ny fofona amin'ny tsiambaratelo;
na inona na inona fanelingelenan'ny toetry ny fahasalamana, izay mitohy mandritra ny fotoana fohy.
Ny hoavy i Mama dia tokony hikatsaka torohevitra momba izay zavatra mampanahy azy. Ny dokotera mahafeno fepetra dia hanana fangorahana amin'ny fanahiana toy izany ary hanome ny toro-marika ilaina. Ny dokotera dia afaka mamantatra ny aretina ary manolotra ny fitsaboana amin'ny fotoana hiarovana ny zazakely amin'ny fiantraikany ratsy amin'ny aretina.
Inona no manampy amin'ny toxemia?
Ny tranon-jaza rongony nandritra ny fitondrana vohoka
Teraka tamin'ny herinandro 35 herinandro
Duphaston amin'ny fitondrana vohoka - fanohanana amin'ny dingana voalohany amin'ny fitondrana zaza
Inona avy no mety hampidi-doza amin'ny vehivavy bevohoka?
Famaritana ny taom-pandaminana
Voninkazo natao tamin'ny volafotsy
Ny toetry ny endriky ny orona
Kitapo misy paoma - recipe
Caviar avy amin'ny tantely
Courteney Cox mialoha sy aorian'ny plastika
Batemin'ny zaza - fitsipika ho an'ny ray aman-dreny
Kofehy misy jiro
Inona no tokony homena ny hopitaly?
Ahoana no hampijanonana ny tahotra olona?